महादेव बास बसेको अमरनाथ गुफाबारे खुले यस्ता रहस्य! ॐ नमः शिवाय! लेखर शेयर गराैं – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > महादेव बास बसेको अमरनाथ गुफाबारे खुले यस्ता रहस्य! ॐ नमः शिवाय! लेखर शेयर गराैं
महादेव बास बसेको अमरनाथ गुफाबारे खुले यस्ता रहस्य! ॐ नमः शिवाय! लेखर शेयर गराैं
admin February 3, 2020 धर्म सँस्कृति	0
काठमाडौं । हिन्दु धर्म ग्रन्थमा अनेक देवी देवताको वर्णन गरिएको छ । एक पटक देवी पार्वतीले देवताहरुका पनि देवता महादेवलाई, ‘किन तपाईं अजर–अमर हुनुहुन्छ ? मलाई हरेक जन्म पछि नयाँ रूपमा तपाईं कहाँ आउनुपर्दछ र वर्षौंको तपस्या पछि तपाईलाई फेरि भेट्नु हुन्छ । तपाईको अमरत्वको रहस्य के हो रु भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । महादेवले देवी पार्वतीको ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन पहिले उचित मान्नुभएन भन्ने जानकारी छ ।
तर पार्वतीको लगनशीलताले गर्दा केही रहस्यमय कुराहरु बताउनुपरेको थियो । शिव महापुराणमा मृत्युदेखि अजर–अमर सम्मका धेरै भागहरु छन्, जसमा एक साधना सम्बन्धी अमरकथा अत्यन्त चाखलाग्दो छ । जुन भक्तहरूलाई अमरत्वको कथा भनेर चिनिन्छन् । हरेक वर्ष लाखौं श्रद्धालु हिउँ अर्धचन्द्रा (हिमालय) मा अमरनाथ, कैलाश र मानसरोवर तीर्थस्थलमा पुग्छन् । किन सयौं किलोमिटर यात्रा रु यो विश्वास त्यसै बढेको होइन ।
पौराणिक मान्यता अनुसार अमरनाथको गुफा त्यो स्थान हो जहाँ भगवान शिवले पार्वतीको रहस्य अमर रहनु भएको थियो, त्यस समयमा ती दुई ज्योतिहरु बाहेक अरु कुनै पनि प्राणी थिएनन् । न त महादेवको नंदी, न सर्प, न उनको टाउकोमा गंगा, न गणपति वा कार्तिकेय।।।नै थिए ।
एउटा गोप्य ठाउँको खोजीमा, महादेवले सर्वप्रथम आफ्नो गाडी नंदी छोडे, जहाँ नंदी छोडे, त्यो पहलगाम भनिन्छ । अमरनाथ यात्रा यहींबाट सुरु हुन्छ । यहाँबाट अलि पर हिडेपछि शिवजीले चन्द्रलाई आफ्नो जटाबाट अलग गरे, यो ठाउँलाई चन्दनवाडी भनिन्छ ।
गणेश टोप अमरनाथ यात्रामा पहलगाम पछि अर्को चरण हो । विश्वास गरिन्छ कि शिवले आफ्नो छोरा गणेशलाई एकान्तको खोजीमा यस स्थानमा छोडेका थिए । यस ठाउँलाई महागुणको पर्वत पनि भनिन्छ । यसबाहेक, महादेवले पनि भाँडा भन्ने कीटलाई परित्याग गरे । फ्लाई छोडेको ठाउँलाई फुलाई उपत्यका भनिन्छ ।
यस प्रकारले, महादेवले उनलाई पछाडि जीवनको पाँच तत्वहरू अलग गरे । यस पछि, महादेव पार्वती संग एक गुफामा प्रवेश गरे । कुनै तेस्रो प्राणी, त्यो हो, कुनै पनि व्यक्ति, पशु वा चरा गुफा भित्र पस्न र कथा सुन्न सक्दैन, त्यसैले तिनीहरूले चारै तिर आगो सल्काए । तब महादेवले जीवनको रहस्यमय कथा सुरू गरे ।
शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार कथा सुन्दा–सुन्दै देवी पार्वती निदाइन् । महादेवलाई यो थाँहा थिएन, उनीले कुराकानी गरिरहे । त्यतिखेर दुई सेतो परेवाहरूले कथा सुन्दै थिए र बीचमा गुञ्जिरहेको आवाज दिदै थिए । महादेवलाई लाग्यो कि पार्वतीले सुनिरहेकी छिन् । दुबै परेवाले सुनिरहे । जब कथा समाप्त हुन्छ, महादेवको ध्यान पार्वतीतिर जान्छ, तब उनी सुतिरहेकी हुन्छिन् । त्यसोभए कथा कसले सुनिरहेको थियो रु
जब उनको दर्शन ती परेवाहरूमा पर्यो, अनी महादेव क्रोधित भए । उही समयमा, परेवा दम्पती उनीहरूको आश्रयमा आए र भने, ‘प्रभु, हामीले तपाईंबाट यो कथा सुनेका छौं । यदि तपाईंले हामीलाई मार्नुभयो भने, यो कथा गलत हुनेछ ।’ यसमा महादेवले उनीहरुलाई नमार्ने भन्दै एक सर्त राखेका थिए । त्यो थियो त्यो परेवाको जोडी त्यस ठाउँमा शिव र पार्वतीको प्रतीकको रूपमा सधैं बास बस्नुपर्नेछ ।
अन्ततः परेवको जोडी अमर भयो र यो गुफा अमरकथाको साक्षि भयो । यसरी त्यस ठाउँको नाम अमरनाथ राखियो । यो विश्वास गरिन्छ कि भक्तहरूले अझै पनि यी दुई ढुकुरहरू देख्दछन् । प्रत्येक वर्ष यहाँ निर्मित हुने शिवलिंग कुने आश्चर्य भन्दा पक्कै पनि कम छैन । यो गुफा भारतको जम्मू र कश्मीर राज्यमा अवस्थित श्रीनगर सहरबाट उत्तर–पूर्वमा १३५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । अमरनाथ समुन्द्र सतहदेखि १३,६०० फिटको उचाइमा रहेको छ । यस गुफाको लम्बाइ ९भित्र देखि गहिराइ० १९ मिटर र चौडाइ १६ मिटर छ ।
यहाँको प्रमुख विशेषता पवित्र गुफामा हिउँबाट प्राकृतिक रूपमा शिवलिंगको निर्माण हुनु हो। प्राकृतिक हिउँबाट निर्मित हुने कारणले यसलाई स्वयम्भु हिमानी शिवलिङ्ग पनि भन्ने गरिन्छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाबाट शुरू भएर जनैपूर्णिमासम्म पुरै साउन महिनाभर पवित्र हिमलिंग दर्शनको लागि यहाँ लाखौं श्रद्धालु आउने गर्दछन्। यस पवित्र गुफाको परिधि लगभग १५० फिट छ र यस गुफामा माथिबाट हिउँको पानीको स९सानो थोपा कुनै९कुनै स्थानमा झर्ने गर्दछ।
यसै गुफामा एउटा यस्तो स्थान पनि छ, जहाँ हिउँको पानी झर्दा झर्दै त्यहाँ लगभग दश फिटको अग्लो शिवलिङ्ग बन्दछ। चन्द्रमाको आकार घटबढ अनुसार यस शिवलिङ्गको आकार पनि घट्ने९बढ्ने हुन्छ। श्रावण पूर्णिमामा यहाँ यो पवित्र शिवलिङ्ग आफ्नो पूर्ण आकारमा हुन्छ र औंसीसम्म यो छोटो हुँदै जान्छ।
आश्चर्यको कुरा के छ भने यो शिवलिङ्ग ठोस हिउँबाट बनेको हुन्छ, जबकि गुफामा सामान्यतस् काँचो हिउँ हुन्छ जुन हातमा राख्ने बितिकै हराउँछ। मूल अमरनाथ शिवलिङ्गदेखि केही फिटको दुरीमा गणेश, भैरव र पार्वतीको यस्तै बेग्ला बेग्लै हिमखण्डहरू छन्।
आफ्नो श्री’मानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतिले यी यु’वतीको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी द’लिदिइन् !
सञ्चालिकाकाे सामान्य त्रुटिलाई गम्भिर बनाईपछि यसरी माफी मागिन् अनिताले… हेर्नुहाेस्
यी राशि हुने युवतीहरु हुन्छन् अत्याधिक भाग्यशाली!
मन्दिरमा चढाएको नरिवलले ‘शुभ फल’को सँकेत गर्ने हुदा यसबारे वास्तविकता जान्नुहोस्